TANTARA ARA-TOEKAREN’I MADAGASIKARA : Hampirantiana an-tsary ho fantatry ny besinimaro
Miditra amin’ny andiany faharoa ny hetsika fampirantiana hoentina hampahafantarana ny tantara ara-toekaren’i Madagasikara nanomboka tamin’ny taona 1960 hatramin’izao. 9 avril 2019
Ny eo anivon’ny FTHM Consulting miaraka amin’ny sampam-pianarana toekarena, fitantanana ary ny sosiolozia eny anivon’ny oniversiten’Antananarivo ary ny tambajotram-pampianarana ao anatin’ny Alliance Française de Madagascar no miara-mitoto mba ahamasaka ity hetsika fampirantiana ity. Lohahevitra ao anatin’ny fampirantiana ny hoe : “ny fitantanana, fanalahidin’ny fampandrosoana ?” Tanjona ao anatin’ity hetsika ity ny ahafantaran’ny olona tsirairay ny tantara nandalovan’ny sehatra ara-toekaren’ny firenena tao anatin’izany 59 taona nahazoana ny fahaleovantena izay.
Tsinjovina ao anatin’izany ireo mpianatra isan’ambaratongany, ny mpampianatra, ny olom-pirenena tsy ankanavaka, ny mpanao politika sy ireo mpandraharaha ara-toekarena. Isany tanjona apetraka amin’ny fikarakarana ny hetsika ihany koa ny fampahafantarana ny olom-pirenena mahakasika ireo trangan-javatra rehetra nolalovan’ny sehatra ara-toekaren’i Madagasikara, hampahafantarina azy ireo ny lesoka nitranga tany aloha ka hakana lesona miainga avy amin’izay.
“Ilaina ny fampahafantarana ny tanora, ny mpampianatra ary ireo tompon’andraikitra rehetra isan-tsokajiny na ara-ekonomika na ara-tsosialy ireo karazana fanamby nandalovantsika nandritra izay enim-polo taona nahazoana ny fahaleovantena izay. Hoentina ahafantarana ihany koa ireo tetikasa nahomby sy ny lesoka tokony hojerena. Tsaratsara kokoa ny mijery izay zavatra tsy nety tany aloha”, hoy ny fanazavana noentin’ny tompon’andraikitra. Eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera ny hetsika. Omaly, 9 avrily no nanomboka ny hetsika voalohany ka hifarana ny zoma 19 avrily etsy amin’ny tranombokim-pirenena Anosy, ao amin’ny rihana fahatelo. Ny alatsinainy 22 avrily kosa ny hetsika andiany faharoa izay hifarana ny zoma 10 mey tanterahina ao amin’ny Cemdlac etsy Analakely. Ankoatr’ireo dia hihanaka manerana ny foiben-toerana misy ny Alliance Française manerana ny tanàn-dehibe miisa fito eto Madagasikara ity hetsika fampirantiana ity.